DEG DEG: Habraaca doorashada Golaha Shacabka oo - Axadle Wararka Maanta
Muqdisho (Axadle) – Guddiga hirgelinta doorashooyinka heer Federaal ayaa goordhowedyd soo saaray Habraaca iyo shuruudaha loo marayo hanaanka doorashada xildhibaanada Golaha Shacabka ee 2020/2021-ka.
Habraaca ayaa qeybtiisa qaab-dhismeedka Guddiga xulista Ergada lagu sheegay in xulida ergada Gobaladda Waqooyi ay noqon doonto mid wadaag ah, taasi oo muddooyinkii dambe uu ka taagna khilaaf.
Xullidda eragada Gobaladda Waqooyi waxay noqonaysaa wadaag.
Kursi kasta oo ka mid ah 275ta kursi ee Golaha Shacabka waxa dooranaya 101 ergo, iyadoo la hubinayo in qaybaha kala duwan ee bulshada ay u dhanyihiin. Guud ahaan tirada ergada ka qayb-qaadaneysa doorashada xubnaha Golaha Shacabka 2020/2021 Jamhuuriyadda Federalka Soomaaliya waa 27,775 ergey, iyadoo kuraasta Gobaladda Waqooyi ay yihiin ergo wadaag.
Kuraasta Gobaladda Waqooyi waxay noqonayaan ergo wadaag. Halkii ergo ee ah 101 waxay dooran karaan 1 ilaa 5 kursi.Ujeeddada hannaanka diiwan-gelinta musharaxa waa in fursad loo siiyo muwaadiniinta doonaya inay tartarmaan, lagana hubiyo oo keliya inay buuxiyeen shuruudihii musharaxnimada. Hanaanka diiwan-galinta murashaxa wuxuu soconayaa 12 maalmood.